पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारलाई तत्काल कारवाही गर्न सिफारिस होला त अब कारबाही ! कारबाहि भए के होला - Samachar PatiSamachar Pati
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारलाई तत्काल कारवाही गर्न सिफारिस होला त अब कारबाही ! कारबाहि भए के होला
पोखरा, २० पौष । वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको ठहर सहित छानबीन संसदीय उपसमितिले पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारलाई तत्काल कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया कानून सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो । उपसमितिले पूर्वमन्त्री २ जना, सचिव ३ जना र नेपाल बायु सेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंशाकारमाथि पनि छानबीन र कारवाहीको शिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको गरिएको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ । यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ ।
उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको उपसमिति संयोजन राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ । कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।
१८ औँ छमछमी तिजको तयारीलाई तिब्र
एक भुटानी शरणार्थी युवक मृतअवस्थामा फेला परे